Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Pablo Fornals Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Pablo Fornals na-egosiputa Eziokwu banyere Akụkọ nwata ya, Mbido mbu, ezinulo, ndi nne na nna, enyi nwanyi / nwunye ka ha buru, ndu ndu, ndu nke onwe na uru ya.
N'okwu doro anya, anyị na-ewetara gị njem ndụ ya, site na mbido ụbọchị, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ nwata na ịrị elu gallery - nchịkọta zuru oke nke Pablo Fornals 'Bio.
N'akụkụ Chora Ohia, Fornals bụ onye na-eme ihe nkiri kachasị elu maka West Ham United, onye ji n'aka mara ihe ọ ga - eme gaa n'ihu na-arụ ọrụ ma na-arọ nrọ. N'agbanyeghị nkwanye ugwu ahụ, ọtụtụ ndị Fans amachaghị banyere akụkọ ndụ ya, nke anyị ga-ekpughere n'otu ntabi anya. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido n'akụkọ banyere oge nwata.
Pablo Fornals Childhood Akụkọ nke:
Maka Biography ndị mbido, ọ na-aza aha, Pablito. Pablo Fornals Malla mụrụ na 22nd ụbọchị nke February 1996 na ndị nne na nna Spanish na Castellon, obodo nke anọ kachasị biri na Valencian Community, Spain.
Pablito bụ ọdụdụ nwa n'ezinụlọ ya - ụlọ nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nna ya na mama ya. Ikpe ikpe site na foto ahụ, ị ​​ga-ekwenye na m na Spaniard were mgbe nne ya dị.
Zute nne na nna Pablo Fornals - nna ya (na 60s) na nne yiri anya
Ya na nwanne ya nwanyị nke okenye - Marta nọrọ n'oge ọ bụ nwata. Inwe ya dị ka onye ibe ya pụtara inwe owu ọmụma. N'oge a, Pablo nwere obi ụtọ ime ka Marta jiri akara agba ya wee dọpụta ahịrị na ihu ya. Nke a ọ na-anọchite anya dike?
Zute nwanne nwanyị Pablo Fornals, Marta. Siblingsmụnne abụọ ahụ nwere obi ụtọ n'oge ha bụ nwata.
Na nloghachi, Pablo nwere mmasị ka nwanne ya nwanyị eyi ya Vandana dị jụụ. Ncheta oge nwata ya enweghị ịhụnanya, ọ bụghị naanị site na Marta kama onye ọ bụla nọ n'ụlọ ya.
Pablo Fornals Ezigbo Ezinụlọ:
Nke mbu, umu aka ya abughi ndi amaala Castellon. Ndị mụrụ Pablo zụlitere ya n'ezinụlọ nke dị nso na klas nke Spanish. N'oge ahụ, papa ya ga-arụ ọrụ karịa oge iji zute ụkpụrụ nke nwa amaala. Ọ bụrụ na ịmaghị, nnukwu nna nke ụlọ abụọ kpochara n'okporo ámá nke Castellon dị ka ọrụ oge niile.
Pablo Fornals Ezinụlọ:
The Teknụzụ Dribbler mụtara ịsụ Spanish na Valencian, asụsụ ndị Barcelona na-asụ. Ebe omumu Pablo Fornals (Castellon) bu nke di na mpaghara Catalan, o buru kwa ndi isi obodo ano na Spain.
Pablo Fornals Untold Akụkọ Akụkọ:
You maara?… Ọ bụghị nnukwu na bọlbụ n'oge ọ bụ nwata. N'oge ahụ, ọ nọ na-emikpu onwe ya n'echiche efu nke ịbanye na Tenis dịka dike nwata, Rafael Nadal. Ka oge na-aga, eziokwu ghọrọ ihe jọgburu onwe ya karịa ọchịchọ ya.
N'otu oge mgbe nwatakịrị ọ bụ 7, Pablo nụrụ ka nna ya na-eto ụmụaka na-agba bọl n'akụkụ ebe ọrụ ya. N'ihi ịmata ihe, Pablo, onye naanị ya nwere anya maka egwuregwu tennis, gwara papa ya ka ọ kọwakwuoro ya bọọlụ.
Kama ikwu banyere egwuregwu ahụ, Mr Fornals debanyere nwa ya nwoke na ACD Benicense - njikọ nke Villarreal. Eziokwu bụ na ọ chọrọ Pablo ka ọ bụrụ egwuregwu bọọlụ na-atọ ụtọ karịa ịnụ banyere mkpali ya. Ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka Pablito bidoro njem njem bọọlụ ya dịka onye na-eti ihe.
Eziokwu gbasara ọrụ mmalite:
Ruo afọ ise, ọ gara ọzụzụ siri ike. N'oge ụfọdụ, ndị nne na nna Pablo Fornals enweghị afọ ojuju na mmelite ya wee nyefee ya n'akụkụ ọzọ dị mma (CD Castellon) na 2008.
Afọ ole na ole ka ọ sonyechara CD Castellon, Fornals nwere nkụda mmụọ na mbọ ya rụpụtara obere ihe. Ọbụna ọ tụfuru olileanya ọ bụla ịbanye na nkwekọrịta ọkachamara na otu ụlọ ọrụ ama ama. Mgbe ọ nọ n'ụdị ya kacha njọ na enweghị onye ọ bụla na-achọ ịbịanye aka ya, Fornals gbagara ndị ezinụlọ ya.
Pablo Fornals Biography - tozọ Na-ewu ewu:
N'ụzọ na-emegide onwe ya, ọ bụ mgbe ọ na-atụghị anya ya ohere meghere maka ya ịbanye Malaga na 2012. N'inwe ohere ya, ọ sonyeere ọgbakọ dị ka onye na-egwu egwu. Mgbe nke ahụ gasị, nọrọ afọ ise na-esote na-edo onwe ya elu n'ụlọ nzukọ ha a ma ama ma nweta otuto nke ndị na-egwu egwuregwu dịka Andres Iniesta.
N'ịchọ ịbanye na klọb nrọ ya (Villarreal CF) Fornals kwụrụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ya ruru £ 10.7million. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bịanyere aka na ụlọ ọrụ afọ ise na Villareal na 2017. Mgbe ya na ha nọrọ otu oge, ọ malitere ịdọta ndị otu egwuregwu na ndị egwuregwu ọgbakọ.
Pablo Fornals ịga nke ọma Akụkọ nke:
N'ịhụ mgbagwoju anya nke bịara n'ihi ọchịchọ nke ịmara ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị ịbanye, Fornals (dị ka ọ dị na mbụ) chigharịkwuuru ndị mụrụ ya maka ndụmọdụ. N'ịbụ onye a gwara ka ọ họrọ klọb ebe ọ ga-adị n'ụlọ, onye na-eme egwuregwu na-enye West Ham United akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Na June 2019, West Ham bịanyere aka n'akwụkwọ maka ego nke £ 24 nde. You klọb bidoro ịchụ mbinye aka ya ebe ọ bụ na ọ mepụtara Rabona nyere Spain na 2019 European Under-21 Championship. Kemgbe ịbanye na Hammers, Fornals guzobere mmekọrịta siri ike na Arthur Masuaku, Sebastian Haller, gbakwunye ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe ngosi vidiyo gosipụtara karịa ngwa agha ya.
Ọzọkwa, kemgbe ọ bịarutere na EPL, Fornals abụrụla akụkụ dị mkpa nke David Moyes'nrọ otu. Ka m na-ede, ọrụ ya dị egwu mere ka ọ bụrụ onye Premier League EA Sports Player of the Month award nomination maka November 2020. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Pablo Fornals mmekọrịta mmekọrịta - enyi nwanyị, nwunye?
E wezụga nne ya na nwanne ya nwanyị, onye dribbler a na-asọpụrụ nwere otu nwanyị ọzọ nke na-eme ka akụkọ ndụ ya zuru ezu. Nwunye Pablo Fornals ga-abụ onye ọzọ karịa Tania Lara. Akụkọ ịhụnanya ha malitere kemgbe June 2016 mgbe mbụ ha zutere na Castellon.
Zute Pablo Fornals nwunye ịbụ - Tania Lara.
Mgbe ha na-eme emume ncheta nke afọ ha anọ, Fornals nyere enyi ya nwanyị (Tania) piggyback na Covent Garden, London. N'ikpe ikpe site n'ụzọ ha abụọ na-aga, anyị kwenyere na ọ ga-akpọrọ Tania na nne na nna ya n'oge na-adịghị anya, na-achọ ngọzi ha maka alụmdi na nwunye.
Ewezuga bọọlụ bọọlụ, Pablo Fornals na-agakarị ebe dị jụụ, ọkachasị mma osimiri, ebe ọ na-enwe mmasị na ịma mma nke okike. Nke a yiri nnọọ ụdị onye otu ibe ibe West Ham, Benrahma kwuru. Ọtụtụ mgbe, ha abụọ na-ejikọta onwe ha na okike dị ka ụzọ isi nweta ume ma na-ezere egwuregwu ahụ.
N'etiti ọtụtụ ihe okike ọ hụrụ n'anya, ọ na-ahọrọ ị listeninga ntị na Spanish rap ma ọ bụ Reggaeton. N'ikpeazụ, Fornals na-enwe mmasị iri nri na aka ya na-asacha karịa iji mkpịsị osisi.
Mgbe anyị nyochachara akụkọ ndụ ya nke ọma, ndị otu anyị chọpụtara na Fornals anaghị elebara okomoko anya oge niile ruo mgbe ọ kwagara West Ham. N'agbanyeghị nnukwu ego ya, onye na-egwu egwuregwu nwetara ikikere ịnya ụgbọ ala ya na 2019 na ụgbọ ala Audi na-acha uhie uhie dị n'okpuru.
Na-ekpe ikpe site na Net Worth nke £ 2.7 nde, Pablo Fornals nwere ike ibi ndụ okomoko. Otú ọ dị, ọ zọkwasịwo ụkwụ n'ụzọ Adama Traore site n'ichebe akụ ya na obere ihe mgbe ọ na-ebi ndu ahaziri ahazi.
Pablo Fornals Ndụ Ezinụlọ:
Maka onye ọkpụkpọ Villarreal, ụzọ ga-aga nke ọma agaraghị adị mma ma ọ bụrụ na enweghị enyemaka nke ezinụlọ ya. Ndị mụrụ ya, nwanne ya na ndị ikwu ya bụ isi ihe kpatara na ọ gbanahụ mmetụta nke enweghị mmetụta mgbe ọ na-esiri ya ike. Akụkụ a na-enyekwu nkọwa banyere ndị mụrụ ya na ndị òtù ezinụlọ ya.
Banyere Pablo Fornals Nna:
Zute Pablo Fornals papa, onye isi na-agba mbọ bọọlụ.
Nke bụ eziokwu bụ na nkwụsi ike ya na nkwenye siri ike nwere njikọ miri emi na ihe ndị ọ mụtara n'aka nna ya. O siri ike Pablo Fornals ichefu ihe nna ya chụrụ, onye na-atụkarị ya n'ala ọzụzụ tupu ọ gaa ihicha n'okporo ámá. Ọbụna mgbe arụmọrụ ya dara ogbenye, papa ya na-ahụkarị na ọ na-eto ya site n'akụkụ.
Banyere Pablo Fornals nne:
N'ezie, anyị anaghị ahapụ mama ya n'àkwà ndị kwadoo ọchịchọ ya site n'oge ọ bụ nwata. Site na ndabara, nne Pablo Fornals ji ịhụnanya na-enweghị atụ gosi ya ya. Ọnụnọ ya na pitch bụ ihe na-akpali akpali nke na-enye Pablo mkpali zuru oke ịrụ karịa atụmanya.
Banyere Pablo Fornals nwanne:
Ruo oge a, nanị nwanne ya nwanyị, Marta Fornals, ka na-arụ ọrụ nke nwanne na ezigbo enyi. Nwa amaala Castellon kwenyere na ya ezughi oke na-enweghị nwanne ya nwanyị okenye. Siblingsmụnne nwoke abụọ ahụ na-ejide n'agbanyeghị usoro ọrụ Pablo ji arụ ọrụ.
Banyere ndị ezinụlọ Pablo Fornals:
E wezụga ndị ezinụlọ ya, Fornals enweela mmekọrịta chiri anya na ndị ikwu ya. Maka ebumnuche kacha mara ya, onye na-eto eto na-amasị nwa nwanne nna ya nke hụrụ ebe a.
Dịka akụkụ nke ịrụzu ọrụ ezinụlọ, Fornals na-emesapụ aka iji soro nna nna ya na nne nne ya nọrọ oge dị mma. Pablo ghọtara na ndụ kacha mma ọ nwere ike inye nne na nna ya ochie bụ ka ya na ha dịrị n'otu.
Pablo Fornals Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Ndụ Akụkọ nke onye na-egwu egwuregwu, lee ụfọdụ ihe ga - enyere gị aka ịmatakwu Bio ya.
Eziokwu nke 1: Ọ na-ada mbà n'oge Ọzụzụ:
N'ime oge ọrụ ya na Villareal, ndị otu ya gbabara Pablo Fornals n'ụlọ ọgwụ ozugbo ọ tụbọrọ na ala ọzụzụ. Akụkọ ahụike ya gosipụtara na ọ tara ahụhụ ọgụ hypoglycaemia (ọkwa shuga dị ala). Agbanyeghị, mgbe ọ gbasịrị ọgwụ zuru oke, onye Midfield na-agbake wee na-elekwasị anya na mbọ bọọlụ ya.
Fornals ọ gafere site na ịnata obere ego iji nweta ọtụtụ nde. N'ụzọ na-akpali mmasị, Pablo Fornals na-akwụ ụgwọ kwa afọ nke £ 3.5 Million emeela ka o nwee ikike ịkwado mkpa ezinụlọ ya. Nke a bụ mmebi nke ụgwọ ọrụ ya dị mfe na West Ham.
Kwa Afọ £ 3,500,000
kwa ọnwa £ 291,667
Kwa Izu £ 67,204
Kwa .bọchị £ 9,601
Kwa elekere £ 400
Kwa Nkeji £ 6.7
Kwa nke abụọ £ 0.11
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Pablo Fornals ' Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 3: Forhụnanya maka nkịta:
Dị ka Marcos Llorente, Fornals na enyi ya nwanyị bụ cynophiles (ndị hụrụ nkịta n'anya). Ikekwe ikike nke nkịta nwere ịhụnanya n'enweghị nkwenye bụ ụfọdụ àgwà ndị dọtara ndị hụrụ ha n'anya.
Ọ bụrụ na ọ ga-emerịrị ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ nke Juan Bernat, ọ ghaghị ịrụsi ọrụ ike. Ka m na-ede Bio a, Pablo Fornals nwere ọkwa dị mma nke na-egosi na ọ setịpụrụ n'ehihie Javier Hernandez dị ka ihe ka mma maka ndị Hammers.
Fornals bụ otu n'ime West Ham bụ onye a na-akpọghị aha ya bụ AKA onye Raumdeuter nke ngwa agha David Moyes. Ka a sịkwa ihe mere ndị na-agbachitere ji ama jijiji na agba ọsọ ya. Biography nke Pablo Fornals na-eme ka anyị ghọta na Mmeri na-ekwe omume mgbe niile maka ndị na-achụ àjà ma jụ ịkwụsị ọgụ.
Ọzọkwa, anyị toro ezinụlọ Pablo Fornals maka inyere ya aka (nke ikpeazụ amụrụ) ka ọ na-eto eto n'ịhụnanya na obi iru ala. Enweghị nghọta nke nna Fornal, ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume na ọ ga-egwu bọl. Nke zuru oke, ihe ngosi nwere ọgụgụ isi na-ekwukarị na o nwere nne abụọ (nne ya na nwanne ya nwanyị) ndị mere ya nwoke ọ bụ taa.
Ọbụna mgbe ịmechara ya na football, onye ọkpụkpọ Spanish echefughị ​​mmalite ya. Ọ bụghị ihe ijuanya Fornals nyere onyinye na General Hospital nke obodo ya na a feat iji luso Corona Nje Virus ntiwapụ. Ka Chineke gọzie ya karịa!
Na Lifebogger, anyị na-agbasi mbọ ike iji akụkọ bọl na-atọ gị ụtọ. Jiri obiọma, kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị mma na isiokwu anyị. Ma ọ bụghị ya, gwa anyị na ngalaba nkọwa, ihe ị chere gbasara Spaniard. Iji nweta nchịkọta ngwa ngwa nke Pablo Fornals Bio, jiri okpokoro Wiki anyị.
Aha n'uju: Pablo Fornals Malla
Aha Nick: Pablito
Age: Afọ 25 na ọnwa 5
Ebe amụrụ onye: Castellon, Spain
Nwanna nwanyị: Ogechi Marta
Enyi / Nwunye: Tania Lara
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 3.5 nde
Ezigbo Net: £ 2.7 nde
elu: 1.78 m (5ft 10in)